Booliska Mombasa oo baaraya qarax 10 qof ku dhaawacmeen oo ka dhacay meel lagu caweeyo – Radio Daljir
Janaayo 2, 2014 2:27 b 0
Mombasa, Janaury 2, 2014 – Booliska dalka Kenya ayaa sugaya amniga guud ee magaalada Mombasa, halkaas oo qarax xoogan ka dhacay saaka arroortii hore, waxaa la sheegayaa in dad badan ku dhaawacmeen weerarka.
Qaraxa oo ka dhacay meel lagu caweeyo xili ku beegan 10 arrooryo ee hore ?ayaa wararku sheegayaan inay ku dhaawacmeen ilaa 10 ruux oo dadkii goobta joogay ah.
Taliska booliska gobolka Coste ee dalka Kenya Agrey Adoli wuxuu sheegay in baaristu socoto isla markaasna xaaladu tahay mid degan.
Booliska Kenya ayaa sheegay in qaraxu u egyahay mid la tuuray isla markaasna uu baxsaday qofkii gaystay.
Magaalada Mombasa ayaa dhowr qarax ka dheceen bartamihii ilaa bilihii u dambeeyey sanadkii tegay, sidoo kale waxaa gobolka ka aloosan xiisad ka dhalatay dil loo geystay sheikh Caboud Rogo sanadkii 2012.
In ka badan 10 qof oo ku dhaawacmay dab xoogan oo xalay ka kacay dhisme ku yaala Minneapolis